Soo dejisan CamStudio 2.7.4 – Vessoft
Soo dejisan CamStudio
CamStudio – software ah si ay u abuuraan screenshots iyo qoraan video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Software wuxuu kuu ogol yahay in lagu soo qabto aagga la doonayo ee shaashada iyo in AVI, Jabbuuti ama MP4 qaabab badbaadiyo video files. Taageeraan CamStudio effects kala duwan si ay u soo bandhigaan hawlaha dulqabo iyo meesha qoraalo text ama video ah. Software ka kooban qalab badan reserved maqal ah ama video ah cajalado. CamStudio sidoo kale u saamaxaaya in ay qarka u saaran hotkeys xakamaynta habboon ee video duubo.
Wareegtay aagga la doonayo ee shaashadda kombiyuutarka aad
Awoodda of record codka
Meeshay ka ah hawlaha la dulqabo
Goobta oo ka mid ah cajalado maqal ah iyo video
CamStudio Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Snagit 12.4.1.3036 iyo 11.2.1.73